जोर विजोर भएपनि सडकमा जाम उस्तै ! - सिम्रिक खबर
जोर विजोर भएपनि सडकमा जाम उस्तै !
बुधबार सरकारले विहिबार देखी मान्य हुने गरी यातायातमा जोर विजोर प्रणाली लागु गर्याे । सोही अनुसार शुक्रवार विजोर नम्बरका गाडी सडकमा गुडिरहेका थिए । कोही जोर नम्बरका पनि गुडिरहेका थिए । भने केही प्रहरीको फन्दामा परेका थिए ।
जोर विजोर प्रणाली लागु हुँदा सडकमा आधा सवारी कम हुनुपर्ने हो र जाम समेत नहुनु पर्ने हो । तर काठमाण्डौमा त्यस्तो रहेन । शुक्रवार विहान त्रिपुरेश्वर देखी रत्नपार्क सम्म निकैबेर जाम रह्यो । केही तस्वीरहरु